Oromoon Filannoo moo hidhannootiin abbaa biyyaa ta’uu barbaadaa ?? - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromoon Filannoo moo hidhannootiin abbaa biyyaa ta’uu barbaadaa ??
Mootummaa koloneefataan sirna nafxanyaatiin ijaaramee fakkeessaaf afaan Oromoo dubbachaa ilmaan Goobanaa Daancee ofitti marsee masaraa dhuunfatee jiru kun eenyummaan isaaf kaayyoon isaa nama ani Oromoodha ofiin jedhuuf hin galle yoo ta’e innuu diina Oromooti.
Akuma suura armaan gaditti arga jirtan J/Kamaal Galchuu dura taa’aa paartii PBO sadarkaa Oromiyaatti dorgomuuf beekamtii boordii filannoo irraa eeyyam dhorkatameeti Iskindir Nagaa namni Finfinnee anatu bulchuu qabaa jedhuuf Finfinnee qofaa irratti nama dorgomuuf boordiin filannoo eeyyameef jechuudha.
Kana yeroon jedhu siyaasaaf osoo hin taane dhugaa dhokatee jiru Oromoon ammayyuu itti hin damqane, boru nafxanyaan tokko ol kaatee maagaalota Oromiyaa gurguddoo ta’an kan akka Adaamaa, Shaashamannee, Dirree Dawwaa, Jimmaa, Mattuu, Naqamtee, Fi Amboo kkf keessatti anatau “Baaldiraas” jettee kaate boordiin filannoo akka eeyyamu shakkiin tokko hin jiru, Inni kun ammoo sirna Abyi Ahmed barbaadu sanaaf tumsa guddaadha.
J/Kamaal Galchuu kaleessa waajira banachuuf Boorana magaala yaabeelloo deemnaan dameen tikaa mootummaa bakka inni hoteela qabatee jirutti dhaqanii dorsisaaf hanga yaalii ajjeechaatti taasisuu isaani beekameera, yaalii isaanii itti milkaa’uu dhabnaan sa’a gabaabduu keessatti akka inni magaalaa Yaabelloo gadhise ba’u taasisameera, Oromoon Oromiyaa irratti mirga hin argatu, nafxanyaan garuu Finfinnee Qeerroon Oromoo qumatamootan dhumeefii irratti abba biyyuumaa maqaa baaldiraasiin kennani jiru.
Abbaan biyyaa Qawweedha, filannoon hin jiru kijibadha, afaaniin abbaa biyyaa ta’uun hin dandaa’amu, Oromoon waan tokko filachuu qaba
1- Gabrummaa hin barbaannu yoo ta’ee akka sabaatti hidhannoo irratti xiyyeeffachuu
2- Filannoon jira jedhamu kun filannoo dhumaatii Oromooti, filannoo hin injifannef itti seenee dumuu irraa tole jedhe gabrummaa ifatti Minilikitti harka kennatee lubbuutiin jiraachuu.
Kana jechuun ykn “Qawwee ykn Gabrummaa” amma tokko filachuun filannoo Oromoo osoo hin taane dirqama jechuudha.
Via: Ittafaa Oro
ODM~Xiinxala Ajaa’ibaa Dr. Teferii Nugusee Xaafaa fi Waahellansaa Faana Egeree Miidiyaarratti, 2020
Abiy biyya galaafata sodaa jedhun qaba!
Oromoo wallaaluu fi seenaa biyyattii tanaa qajeelloon hubachuu dhabuu irraa madda. Haasawa isaarraa fi gocha isaarraa akka hubannetti seenaan Abiy beeku gar-tokkeedha. Madaalliin seenaa Itoophiyaa roga hundaa hin hubanne. Yaanni isaa akkuma arginu mootota Nafxanyaatti irkata. Kanaaf Oromoos akka jarri itti ilaaltutti ilaala. Akkasitti akka yaadu kan godhu guddina isaatii fi ilaalcha inni dhagayaa ture ykn kitaaba inni dubbisaa turetu murteessa. Kanatu akka gara tokkotti loogu isa taasise. Akka salphaatti ilaalcha qabate keessaa bahuun isa rakkisa. Kanaaf akka dhageenyutti gorsa gama Oromootiin dhufu tokkoollee kan fudhachuu dideef.
Akkasumas ta’ee sababa Oromootiin akka tasaa carraa argate. Sababni carraa na jechisiise nama ilaalcha Oromoo hin qabnetu maqaa Oromootiin MM ta’e. Kaayyoo ummatni Oromoo wareegama itti kafale hin hubanne. Inni ammoo nama aangoo jaalatu. Aangoo jaalatu kan “haati koo nugusa taata naan jette” jedhee hime santu akka carraa dhugoomeef.
Aangoo jaalatu tana tursiif hawwii qaba. Garuu kaayyoo Oromootiin walitti bu’uun aangoo akka dhabsiisu hin hubanne. Innis aangoo tana carraa isaatiin argate jedhee amane natti fakkaata. Kanatu ofirratti daba hojjatee aangoo jaalatu akka dhabu isa taasisaa jira.
Suuraan barruu tana waliin maxxanse kana irraa salphaatti waan hedduu hubachuun ni danda’ama. Jalqaba wareegama Qeerrootiin “Fuudhe Furtuu” kan jedhu ibsa. Booda adeemsi kee kan “Maddamarii” nuuf hin taane jechuu ibsa. Kan olbaases, kan deebi’ee gadi buuses Qeerroodha. Waan akkanatti ifa jiru kana akka hin hubanne kan godhe ilaalcha gar-tokkoo inni qabuu fi aangoo carraan argadhe jedhee yaadudha. Osoo aangoo jaalatu madda aangoo isaa wallaalee daba ofirratti hojjatee ummatas miidhe.
Inni amma kana hubachuu hin danda’u. Akka isaatti ummatatu dogongora qaba. Namni yoo dhukkbsachuu beekee amane dawaa barbaadata. Inni dhukkuba isaa kana waan ofirratti hin beekneef dawaa argachuurraa fagoo jira.
Yeroon kana yaadu furmaatni isaa baay’ee walxaxaadha. Biyya galaafata sodaa jedhun qaba.
Warri Orooppaa kun Kolonel Abiy Ahmed kana akka malee shakkaniiru! Qilleensa kana-Viidiyoo kana gadii dhaggeeffadhu!
የአውሮፓ ህብረት አምባሳደር የሆኑት አሌክስ ሮንዶስ ስለ አብይ አሕመድ ተጠይቀው…” አብይ የኛና የአሜሪካ ሃሳብና ፍላጎት ነው እያስፈፀመ ያለው ነገርግን አንዳንዴ ስለራሳችን ፍላጎት ብቻ ስናስብ አጠቃላይ የአከባቢው የፀጥታ ሁኔታ ያሳስበኛል ኢትዮጵያ እንደ ዩጎዝላቪያ አደለችም እንደ ግድብ ነች ስትፈርስ የአከባቢው አገራትም ይጎዳሉ….”
Ambassador Alex Rondos EU Special Representative to the horn of Africa @ Woodrow Wilson Center.